SLT Sports: Kooxda Man United Oo Hadda Uun Horyaalku U Bilaalabay & Qodobo Kale | Somaliland Today
← Xoghaya Guud Ee Qaramada Midoobay Oo Jeediyay Khudbad Uu Kaga Hadlayay Taay Iyo Sharabaado Uu Soo Xidhay.
Raali-gelin Iyo Sixid →
SLT Sports: Kooxda Man United Oo Hadda Uun Horyaalku U Bilaalabay & Qodobo Kale
(SLT-Manchester)-Saddexdii bilood ee uu Louis van Gaal tababaraha u ahaa Man United may ahayn, bilo uu ku jiray bilaha malabka ah ee wuxuu dhadhamiyay kulaylka iyo kadeedka ay qabaan tababarayaasha horyaalka ingiriisku.wuxuu xaqiiq u soo taabtay wixii markii uu yimid loo sheegayay isla markaana wuxuu hadda ka garaabayaa inuu horyaalka ingiriisku ka duwan yahay dhamaan horyaaladii uu guulaha muhiimka ah ka soo gaadhay.
Van Gaal ayay shaqada united farxad ku soo dhawaysay isagoo badiyay dhamaan kulamadii saaxiibtinimo ee uu gacanta ku hayay United balse waxay kulankii ugu horeeyay horyaalka guul daro xanuun badani gurigiisa Old Traford kaga soo gaadhay kooxda Swansea City intaa wixii ka danbaysayna wuxuu ku jiray xaalad xun oo walwal iyo walba haar badan. Van Gaal
Ugu danbayn United ayaa u muuqatay inay ka soo kabsanayso guul darooyinkii iyo qaab xumadii ay ku bilaabatay horyaalka, iyadoo markii ugu horaysay xili ciyaareedka gaadhay laba guulood oo isku xiga taas oo ka saaciday inay soo gasho kaalinta afraad.
Waxaa lagalay fasax laba todobaad ah oo ay qaramada aduunku ciyaarayeen, waxayna todobaadka bilaamaya sabtida la ciyaari doontaa kooxda West Brom, balse waxaan odhan karnaa wali muu bilaamin tijaabadii rasmiga ahayd ee Man United, sababtoo ah wali lamay ciyaarin koox ka mid aha kooxaha u tartamaya horyaalka. Tusaale ahaan Chelsea waxay la ciyaartay Arsenal iyo Man City, Liverpool waxay la ciyaartay Man City iyo Tottenham, Arsenal waxay la kulanta Man City iyo Chelsea haka ay Man City la wajahday Arsenal iyo Chelsea, Waxaanad halkaa ka arkaysaa inay kooxaha waa wayni dhamaantood ciyaareen kulamo adag marka laga reebo Man United oo kulankeedii ugu adkaa ahaa Everton.
Marka ay Man United la ciyaarto West Brom ayay iskugu xigi doonaan laba kulan oo kala daran oo noqon doona kuwa lagu tijaabin doono bal inuu dib udhiska Van Gaal shaqaynayo iyo inuu yahay hal bacaad lagu lisay, waxay la ciyaari doontaa kooxda Chelsea, haddana waxay geesaha isla galidoonaan jaarkooda Man City oo sanadihii ugu danbeeyay dhibaato wayn ku ahayd.
Gary Neville ayaa qiray in kulamada soo socdaa muujin doonaan halka ay Man United taagan tahay waxaana hadalkiisii ka mid ahaa: “Marka ay Man United la ciyaarto Chelsea iyo Man City waxaanu xaqiiqdii ogaan doonaa halka ay Man United taagan tahay, wali lamaanu ciyaarin koox xoogleh. Waxaa ugu adkayd Everton oo aanu gurigayaga joognay”.Gary-Neville.
Ugu danbayn, waxaan odhan karnaa wali horyaalku Man United umuu bilaamin waxaana la eegidoonaa qaabka ay ku wajahdo kooxda duulaysa ee Jose Mourinho iyo tan Pellegrini ee aan ka hoosayn.
Haddii ay Man United labdan kulan ay ka hesho wax ka badan laba dhibcood, waxaa loo tix galin doonaa inay horumar samaynayso, haddii kalena hawl badan ayaa u taala Van Gaal. Sir Alex ayaa odhan jiray marka ay laba kooxood oo waa wayni iskugu xigaan waa inaan 4 dhibcood ka helnaa taas oo micnaheedu yahay inuu meel adag ka taagnaa guul daro ka soo gaadha kooxaha waa wayn.
Sanad Guurada 10aad Ee Lionel Messi Ee Barcelona Iyo Guulihii Uu Gaadhay 10 Kaa Sano(Warbixin).
Gooldhaliyaha xulka qaranka Argentina iyo kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa maanta u dabaal dagaya sanad guuriadiisii 10 aad ee ka soo wareegtay tan iyo markii uu kulankii ugu horeeyay ee horyaalka La Liga-ha Spain u safto Barcelona.
Messi ayaa kulankiisii kowaad ee rasmiga ahaa u saftay kooxdiisa Barca, maanta oo kale 10 sano ka hor, waxayna ku beegnayd October 16,2004. Messi ayaa kulankisiii ugu horeeyay kooxdiisa kala qayb galay kulanka derbiga ah ee Espanyo iyo Barcelona.
Messi oo kulankaa soo galay daqiiqadii 82aad ee dhamaadkii ciyaarta ayaa lagu soo badalay Deco oo ahaa ciyaartoyga dhaliyay goolka kaliya ee ay Barcelona guushu ku raacday, waxaana badalkaas loo arkayay inay Barcelona waqtiga uun ku luminayso. Messi ayaa markaas xidhnaa maaliyada ama funaanada No.30 oo ah numberada inta badan loo xidho da’yarta kooxaha. Messi ayay markaa da’diisu ahayd 17 jir.
Espanyol iyo dadka daawanayay ayaa badalkan u arkaayay inuu yahay mid khidadeed oo ay Barcelona doonayso inay waqtiga ku lumiso manuu jirin qof ka fikiraayay inuu da’yarkani noqon doono ciyaartoga Barcelona iyo aduunka ugu saamaynta badan doona.
Lionel Messi ayaa maaliyadii uu ku ciyaaray 10 kii daqiiqo ee kulankaa ugu horeeyay u hibeeyay hooyadii, wuxuuna isagoo ka hadlaya yidhi: “Tobankaa daqiiqo waxay I xusuusin doonaan inta ka hadhay noloshayda oo dhan, aad iyo aad ayaan u faraxsanahay”.
messi Haddii kulankii ugu horeeyay ee Messi uu badalka kulankaas ku soo galay 10 kii daqiiqo ee ciyaarta ugu danbaysay loo arakayay inay Barcelona waqtiga ku luminayso, ayaa ka fikirayay inuu Messi ku guulaysan doono dhamaan koobabka iyo abaal marinaha shaqsiga ah ee uu ku guulaystay?
Messi ayaa rekoor ku dhigay abaalmarinta shaqsiga ah ee kubbada cagta aduunka oo dhan ugu qaalisan ee Ballon d’Or-ka, taas oo uu ku guulaystay afar jeer oo isku xigta.
Messi ayaa kooxdiisa Barcelona kula guulaystay 3 koob oo Champions League ah, lix koob oo horyaalka La Liga-ha Spain ah, laba koob oo ah koobka kooxaha aduunka ee Club World Cupka, Laba koob oo Cope Del rey ah iyo shan koob oo ah Supercopa de España.
Halkan Ka Akhri koobabka iyo sanadihii uu Messi Barcelona kula guulaystay 10 kaa sano ee uu u ciyaarayay.
Horyaalka La Liga 6 jeer: 2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13
Koobka Copa del Rey 2 jeer : 2008–09, 2011–12
Koobka Supercopa de España 5 jeer: 2005, 2006, 2009, 2010, 2011
Koobka UEFA Champions League 3 jeer: 2005–06, 2008–09, 2010–11
Koobka UEFA Super Cup 2 jeer: 2009, 2011
Koobka FIFA Club World Cup 2 jeer: 2009, 2011
Rekoodhada Uu Messi Ka Dhigay Spain:
– Goolasha Ugu badan ee ciyaartoy hal xili ciyaareed dhaliyo: 50 gool
– Saddexlayda ugu badan ee ciyaartoy hal xili ciyaareed dhaliyo: 8 Saddexley.
– Ciyaartoyga goolasha ugu badan kadhaliyay Supercopa de España: 10 gool
– Goolsha ugu badan ee uu ciyaartoy dhaliyo kulamo isku xiga oo horyaalka ah: 21 kulan, 33 gool.
– Ciyaartoyga ugu goolasha badan El Clásico: 21 gool.
-Ciyaartoyga goolsha ugu badan ka dhaliyay hal xili ciyaareed: 73 gool
Rekoorada Kale ee Lionel Messi Waxaa ka mid ah:
-Ciyaartoyga 3 jeer ku guulaystay kabta dahabka ah ee Yurub, waxayna wadaagaan Cristiano Ronaldo.
– Ciyaartoyga goolasha ugu badan ka dhaliyay FIFA Club World Cup: 4 gool, waxayna wadaagan halyayga ree Masar ee Mohamed Aboutrika
-Messi ayaa buuga dhacdooyinka aduunka ee Guinness World Recordka ku galay goolasha rasmiga ah ee ciyaartoy dhaliyo hal sano, wuxuuna sanadkii 2012 dhaliyay 92 gool.
– Saddexleyda ugu badan UEFA Champions League: 4jeer
-Goolasha ugu badan ee ciyaartoy ka dhaliyo hal kulan oo UEFA Champions Leaguega ah: 5 gool.
– Messi ayaa saddex jeer ku guulaystay kabta tahabka ah ee Horyaalka Spain ee Pichichi taas oo uu ku guulaystay xili ciyaareedyadii 2009-2010, 2011-2012 iyo 2012-2013.
– Ciyaartoygii ugu horeeyay ee 12 gool u dhaliya xulka qarankiisa halsano waxayna wadaagaan Gabriel Batistuta.
-Ciyaartoygii ugu horeeyay ee 21magaalo oo Yurub ah goolal ku dhaliyay.
Ugu danabayn Messi oo ay wali da’diisu tahay 27 jir ayaa kooxdiisa Barcelon au dhaliyay 361 gool, isagoo u saftay 434 kulan, wuxuuna u ciyaarayay 11 xili ciyaareed wuxuuna kooxdiisa Barcelona kula guulaystay 21 koob, wuxuuna wali rajaynayaa inuu sii kordhiyo rekoodhada iyo koobka uu kooxdiisa kula guulaysanayo. Messi ayaa todobaadkan rajaynaya inuu jabiyo rekoodhaka gool dhalinta horyaalka Spain u yaala, wuxuuna ka fikirayaa in Bernabeu loogu xafladeeyo. waxakale oo jira bilado badan oo aanan halkan ku xusin oo uu Messi ku guulaystay balse waxaan soo qaatay kuwii ugu muhiimsanaa.
Wenger: Mesut Ozil Waxa Uu Soo Laaban Doonaa Bisha December.
Arsene Wenger ayaa shaaca ka qaaday in xiddiga Arsenal Mesut Ozil inuu garoomada ku soo laaban doono waqti ka dhow sidii laga cabsi qabay, waxaana uu soo jeediyay inuu soo laaban doono bisha December.
Tababaraha reer France ayaa dhawaan sheegay in xiddiga ugu qaalisan Gunners uu maqlay dhawaaq uu sameeyay jilibkiisa kulankii guuldarro 2-0 ay ku soo gaartay Stamford Bridge balse uu isaga sii jiray ciyaarta si uu u raadiyo natiijo.
Laakiin tababaraha Arsenal ayaa haatan warkaas ka laabtay isagoo sheegay inuusan ka warqabin sida dhaawaca uu u xun yahay isagoo sidoo kale xaqiijiyay in Ozil uu maqnaan doono muddo lix isbuuc ah, waxaana ay si aad ah uga yartay 10 ilaa 12kii isbuuc ee markii hore la saadaaliyay.
“Ozil waxba iima sheegin intii ay ciyaarta socotay. Xitaa ma aanan ogeyn.” ayuu Wenger u sheegay saxaafada.
“Waqtigii nasashada, dhakhaatiirta kooxda waxa ay ii sheegeen inuu xanuun yar ka dareemay jilibka laakiin ma aheyn mid xun. Waxaana uu doonayay inuu garoonka ku laabto.
“Waxa uu ugu yaraan maqnaan doonaa lix isbuuc. Warka wanaagsan ayaa ah in Walcott, Gnabry iyo Arteta inay kooxda ku soo laabteen.”